nmn & nr umgubo wemveliso yomgubo hplc≥98% | Umgangatho we-AASraw
I-AASraw ngumenzi oqeqeshiweyo we-anabolic steroid powder kunye nokuhanjiswa okukhuselekileyo!
I-Testosterone Inanthate powder
I-Testosterone propionate powder
I-Testosterone Undecanoate powder
I-Testosterone Isocapronate powder
Dapoxetine iHCL powder
I-Lorcaserin HCL powder
I-Nicotinamide riboside chloride
J 147 Umgubo
Yenza iimveliso eziphambili, uze nezona zilungileyo kwezona zininzi.
Imithetho eyisiseko ye-AASraw Biochemical Technology Co.,
Ltd. Ngaphansi kwalo mgaqo, siqinisekisa bonke abathengi:
1.Ezo zonke iimpahla ezisuka kuthi zihlambulukileyo zingekho ngaphantsi kwe-98%.
2.Kubomi besikhombi, zonke iifowuni zethu eziluhlaza ziqinisekisiwe ukuba ziphumelele.
3. Ukuphuculwa kweteknoloji rhoqo kumgangatho olungcono kunye nokungcola kangako.
I-4.Uqeqesho oluphezulu kumgangatho wokufumana impilo enempilo.
teknoloji e phambili
I-AASraw inenkqubo epheleleyo yolawulo lwe-SOP (Inkqubo yokuSebenza eseMgangathweni). Yonke imisebenzi ibhaliwe, iyakwazi ukulandelela, kunye nengxelo yabathengi / izimvo kunye nenkqubo yokukhumbula. Abaphathi boVavanyo, ukutshintsha, ukulungiswa kunye nomngcipheko yindawo yonke yokuveliswa kwepowder eluhlaza. Iminyaka, izinto zethu eziluhlaza zikwi-100% esemgangathweni olungileyo, osinceda ukuba sakhe igama elibekekileyo kolu shishino.
Ngaphandle kolawulo olungqongqo kulawulo lwe-SOP, izixhobo ezinxulumene noko ziya kuba ngumncedisi kulawulo lwenkqubo, ukuvavanywa kwiimveliso, ezinje nge-HPLC (ukusebenza okuphezulu komatshini chromatography), umatshini we-chromatography, i-LC / MS (i-Liquid chromatography-mass spectrometry) umatshini, njl. Kwakhona, iqela lethu le-R & D lisebenza nzima kwi-reserch kuvavanyo lwetekhnoloji kunye nokuqinisekisa, kubandakanya ukwahlulwa okungcolileyo, ukuhlalutya, ukulandelela, njl njl.
Amagama ezixhobo uhlobo
Umatshini weHPLC Agilent 1200; Amanzi; Shimadzu
Umshini wokuchithwa kwegesi HP6890; Agilent4890; Shimadzu
I-Particle Analyzer Malvern MS2000
Umshini we TOC Shimadzu TOC-Vwp
I-spectrophotometer ebonakalayo ye-UV. Bruker Tensor 27
DSC umshini Mettler DSC823e
HPIC I-Dionex ICS-90A
Umshini weLC / MS Agilent 6120
Umshini we-ICP-OES Shimadzu ICP-9000
Ngomnxeba weTemetature ophantsi, i-AASraw inolwazi olunzulu nolwazi olunamava. Oku kunceda i-AASraw ukuba ibe neenketho ezininzi kwi-teknoloji phantsi kwemoya yokushisa ephantsi. Ngolu khetho, abathengi bethu bangafumana iimveliso ezingcono ngexabiso elincinci.
Kwiintlobo ezahlukeneyo zokuvelisa (zombini ii-batches kunye ne-serial manufacturing), i-AASraw inamandla kwisixhobo (i-Glassware kunye ne-Hastelloy Alloy) namava afana nawo.
–80 ° C, Uphando lweeNqanawa ezili-10 loPhando (R & D)
–80 ° C, 500Liter isitya sokwenza iikhilo kunye noPhuculo lweTekhnoloji
–80 ° C, 2000Liter Ukwenziwa komyalelo wobuninzi
Ngexesha lokuveliswa kweebhendi ezahlukeneyo, kukho iintlobo zeempahla ezizodwa okanye ukuCoca kunye noKhuselo (Insimbi engenasici, iiglasi kunye neHastelloy Alloy).
Ibha ye-100, i-100mL ~ 1L yoPhando lweSitya, i-R & D）
Ibha ye-100, i-20L ~ 50L ikhilo yenqanawa yokuThengisa kunye neTekhnoloji iphuculwe
Ibha ye-100, i-1000L ~ 5000L yokuveliswa komyalelo wenqwelomoya
Ithempyutheni yokuphendula iVietric ephakamileyo kunye nokuveliswa kwemveliso emikhulu
Ilungelo lokushicilela elinamalungelo okushicilela 2021
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyenzayo: Asenzi mabango malunga neemveliso ezithengiswe kule webhusayithi. Akukho lwazi lubonelelweyo kule webhusayithi luye lwavavanywa yi-FDA okanye yi-MHRA. Naluphi na ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lubonelelwa ngokolwazi lwethu kwaye ayijoliswanga ukubuyisela ingcebiso ngugqirha oqeqeshiweyo. Nawuphi na ubungqina okanye ukuphononongwa kwemveliso okunikezelwa ngabathengi bethu akuyiyo imbono ye-aasraw.com kwaye ayifanele ithathwe njengengcebiso okanye inyaniso.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.dzanlbb.com www.cakapi.com www.apicdmo.com www.hashuni.com